विश्वकप सँगैं चर्चित क्लव खेलाडी खरिद विक्रीमा केन्द्रितः रियल म्याड्रिड आउन लागेका यी विश्वक प्रख्यात खेलाडीहरु, हेर्नुहोस् कसको सम्भावना कति ? « Today Khabar
विश्वकप सँगैं चर्चित क्लव खेलाडी खरिद विक्रीमा केन्द्रितः रियल म्याड्रिड आउन लागेका यी विश्वक प्रख्यात खेलाडीहरु, हेर्नुहोस् कसको सम्भावना कति ?
प्रकाशित २७ असार २०७५, बुधबार १५:५१
टिमका भरपर्दा खेलाडी बाहिरिने भएपछि रियाल मड्रिडले उनको ठाउँमा नयाँ स्टार खेलाडी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । रोनाल्डोको ठाउँमा रियल म्याड्रिडले कसलाई कुन स्तरका खेलाडीलाई टिममा ल्याउछ भन्ने धेरैको आसा छ । रोनाल्डोले रियल मिड्रड छोडेपछि उनको ठाउँ लिने सम्भावित खेलाडीको नाम बाहिर आउन थालेका छन् ।
फुटबल लण्डनका अनुसार यो सूचिमा चेल्सीका इडन हजार्डलाई रियल मड्रिडले अघिल्लो नम्बरमा राखेको छ । २७ वर्षका हजार्डले चेल्सी छोड्न चाहेमा उनी रियलको रोजाइमा पर्न सक्ने छन् । उनीसँगै पिएसजीका केलियन एमबाप्पे र नेइमार, टोटनह्यामका ह्यारी केन, लिभरपुलका मोहम्मद सालह पनि रियल भित्रन सम्भावित खेलाडीको सचिवमा छन् ।
हजार्ड रियल जान सक्ने सम्भावना बढी छ । एउटा बेलायती पत्रिका मिररका अनुसार चेल्सीमा बसेमा हजार्ड आउँदो सिजन च्याम्पियन्स लिग बिहीन हुनेछन् ।रोनाल्डो २००९ मा म्यानचेष्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिड आएका थिए । उनले क्लबका लागि ४५१ गोल गरे भने ५ पटक बालोन डिओर अवार्ड पनि जितेका छन् ।
रियल मड्रिडका फर्वाड क्रिष्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस जाने निश्चितनै भएको छ । रोनाल्डो इटली जाने चर्चा चलेको केही दिनपछि मड्रिडले त्यसलाई औपचारिक पुष्टि गरेको हो । यससँगै रोनाल्डो १० वर्षे बेर्नाबाउ यात्रा अन्त्य भएको छ । ३३ वर्षीय रोनाल्डोले रियल मड्रिडमा रहँदा चार पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि उचाले ।